TTSweet: ပန်းတို့ရဲ့ အလယ်မှာ ...
ဟိုတလောက စင်္ကာပူ botanical garden သွားတာ ပန်းလေးတွေ လှလို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်လာခဲ့တယ်။ botanical garden မရောက်တာ ၈နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့။ သမီးလေးပျော်အောင် လိုက်ပြရင်း မိသားစုတွေ တောထဲတောင် လမ်းလျှောက်ကြသေးတယ်။ တောတောင်သဘာဝတွေ ချစ်တတ်သူမှို့ လားမသိ ။ အဲလိုသွားရတာ သိပ်ပျော်ပါတယ်.... သစ်ခွဥယျာဉ်မှာ ၀င်ကြေး ငါးကျပ်ပေးပြီး ဓာတ်ပုံတွေ အ၀ရိုက်လာခဲ့တာ။ ပန်းလေးတွေ လှလွန်းလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာနဲ့ကို တန်ပါတယ်။
ညနေစောင်းတော့ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဖြေဖျော်တဲ့ နားက မျက်ခင်းပြင်စိမ်းစိမ်းပေါ် လဲလျောင်း အနားယူပါတယ်။ တစ်ပတ်လုံး ပင်ပန်းတာတွေတောင် တော်တော် ပျောက်သွားပါတယ်။ ပန်းပုံတွေအများကြီး ရှိသေးတယ်။ နောက်မှ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်တင်ပေးမယ်နော်။ ပုံကြီးကြီး ကြည့်ချင်ရင် ပုံကို ကလစ်ကြည့်ပါနော်။ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။
စူး August 15, 2009 at 9:48 AM
လှလိုက်တာ လှလှိုက်တာ အမရာ...။
ကြည်ဖြူပိုင် August 15, 2009 at 11:13 AM
ကိုပေါ August 15, 2009 at 11:43 AM
ဒင်ဒရိုဘီယံ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့စတဲ့ ပန်းကလေးရော အမှတ်တရ မရိုက်ခဲ့ဘူးလား။း-)
(စင်္ကာပူအစိုးရက မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ထားတဲ့ ပန်းကလေးလေ။)
T T Sweet August 15, 2009 at 11:56 AM
ညီမလေး ကြည်ဖြူပိုင် ... ဟိုနေ့ကပဲ ဘလော့တစ်ခုမှာ ပို့စ်တစ်ခုဖတ်ဘူးတယ်။ botanical garden သွားတဲ့အကြောင်းပဲရေးထားတာ... အသက်ကြီးတော့မေ့ပြီလေ ... အဲဒါညီမလေးလား????
ကိုပေါနော် ... ဒါအမှတ်တရ ရိုက်စရာလား ...
အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းနေကြတာ ... မသိဘူးများမှတ်နေလား မသိဘူး။ အဲနောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်း သိဒယ်နော်... ကိုယ့်အိမ်ကလူ ပြောပြထားတာ ...
:P August 15, 2009 at 4:44 PM
ပြောပြပါ တီတီဆွိ... နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်းကို
:P August 15, 2009 at 4:58 PM
ပန်းတွေတင်တာ ရီတာဆီမှာ တီတီဆွိတောင်ကောမန့်ချခဲ့သလားလို့...။
ကိုလူထွေး August 16, 2009 at 4:22 AM
ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မှာ ပန်းတွေချည်းပဲ ရှိတာလား... ရှားပါးသစ်ပင်တွေ ရော မရိုက်ခဲ့ဘူးလား T T §weet ?
Rita August 16, 2009 at 5:59 PM
လှတယ် အစ်မ။ ကျွန်မဆီမှာတော့ ဖုန်းကင်မရာနဲ့မို့ သိပ်မကောင်းဘူး။
နောက်ကွယ်က ဇာတ်လမ်း သိချင်လိုက်တာနော်။
T T Sweet August 16, 2009 at 8:38 PM
နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းကတော့ကွယ် ဂိုချောက်ထောင်လဲ ပါတယ်၊ မြောက်ကိုရီးဟားလဲပါတယ် ... သင်းဘောလဲပါတယ် ... အဟမ်း ... အဟမ်း ... တော်မှပဲ ... တော်နေ တီတီဆွိ ပြန်ရင် ဆန်ပြုတ်စားနေရမှာ စိုးလို့ ...
ကလူထွင်း ... ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မှာ သစ်ပင်ကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ... ရှားပါးအပင်တွေဆိုလို့ မမြင်ဘူးတဲ့ အပင်တွေလဲ ရှိပါတယ် ... ဒါပေသိ အစ်မက မိန်းခလေးပီပီ လှတာကြိုက်တော့ လှတဲ့ပန်းလေးတွေပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လာခဲ့တာ ... သစ်ပင်တွေကတော့ သိပ်မရိုက်ဖြစ်ပါဘူး။